ODA: Walgahii Paarlamaa Har’aa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsODA: Walgahii Paarlamaa Har’aa
Manni Maree Bakka Bu’oota ummataa guyaa har’aa walgahii ariifachiisaa waamee jira. Ijoon ajandaa dhiyaatu immoo dhimma COVID 19 irratti gabaasa Ministeera Fayyaa caqasuu kan jedhu. Haa ta’u malee akka dabalataan eeggamu gabaasa kana irratti hundaayuun dhimma Filannoo biyyoolessaa irrattis mari’achuu danda’a.
Filannoo biyyoolessaa eeggama ture haala seera cabseen yeroo hin beekkamneef erga dheereffame booda biyyattiin tasgabii dhabdee jirti. Akka Heera Mootummaatti yeroon aangoo mootummaa amma jiruu kan dhumatu ALI Fulbaana 25, 2013 dha.Sababaa kanaan qaamolee hedduu biratti seerummaan (legitimacy) mootummaa kanaa gaafii guddaa keessa galaa jira. Keessumattuu kan filannoon dabarfame sababaa dhukkuba Koronaatifi jedhamus , Mootummaan Naannoo Tigraay Filannoo naannoo ofiitti gahumsaan gaggessuu danda’uun isaa dhukkubni koronaa Filannoo dabarsuuf sababaa gahaa hin ta’in kan saaxile. Kuni imloo rakkoo siyaasa biyyattii daran akka walxaxu waan godhuuf mootummaan Dr Abiy dafee filannotti akka galu isa dirqisiisa.
Haata’unmalee hooggantoota fi miseensota Paartilee Mormituu ciccimoo, siyaasa biyyaa irratti dhiibaa uumuu danda’an walitti qabanii hidhuun dirree addatti baafatanii filannoon gaggeefamu rakkoo fudhatama dhabuu (legitimacy crisis) mootummaa kanaa bu’uuraan hin furu. Kana waan ta’eef yoo biyya tasgabbeesuu barbaachise, warra yakka tokko malee ilaalcha siyaasaa isanitiin qofa hidhaman atattamaan gadi lakkisuun mariin baldhaan gaggeefamee biyyaaf furmaata kaayun barbaachisaadha jenna.